SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Yakakosha Mafuta Kunhuhwirira Kunhuhwirira, China SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Yakakosha Oiri Rinonhuhwirira Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri limited
SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Yakakosha Oiri Rinonhuwirira Inonhuhwirira
500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Yakakosha Oiri Rinonhuhwirira Diffuser
Saizi imwechete pasuru:
· AROMATHERAPY DEVICE: Iyi ultrasonic yakakosha mafuta diffuser chishamiso multifunction aromatherapy mudziyo kusiyana nechero imwe yawakamboshandisa. Iyo inoratidzira yakakura uye yakapusa kuchenesa hombe 500ml tangi remvura, 7 akasiyana LED mwenje mavara, akawanda mhute nebulizer modes, pamwe nekuchengetedza auto-switch iyo inodzivirira iyo kubva pakupisa zvakanyanya kana ikabuda kunze kwemvura.
· Huru kugona uye KUKURA ZVINOGONESESA MWEYO HUNHU: Iine huwandu hwemamirilita mazana mashanu, izvi zvakanaka kumakamuri makuru uye nguva yekushanda inogona kusvika maawa gumi nematanhatu. Iishandise kuvandudza mweya wepamhepo uye mamiriro emuchadenga, kufukidza hwema hwezvipfuyo kana kusvuta, uye kukudzivirira iwe mhuri kubva kune yakanyanyisa kuomesa mweya, tusingaoneki, allergener uye nezvimwe!
· BPA-YEMAHARA PREMIUM YAKANAKA MATERIALS: Kana zvasvika kune yedu yekutanga yakakosha mafuta diffusers, isu tinoita poindi yekushandisa chero chinhu kunze kweiyo yakafanana -yakanyanya-giredhi giredhi, yakachengeteka, uye eco-inoshamwaridzika PP zvinhu zvemabhodhoro evana zvinogadzirwa kubva, pamwe nehurumende -ye-iyo-iyo-ekugadzira mashandiro maitiro uye akaomarara mhando kudzora.
· CHIPO CHIKURU CHIDZIDZO CHEMWE WESE: Kana iwe uri mumusika wechipo chakanaka uye chinoshanda, unogona kumira kutarisa. Iyi hombe aromatherapy yakakosha mafuta diffuser ipfungwa inofungidzira uye inobatsira, iyo iyo munhu wese anogona kubatsirwa nayo. Nesanganiswa yemavara, dhizaini uye mashandiro akadaro, iri mhando-yakasimbiswa kurova
aromatherapy yakakosha mafuta diffuser
adapta, kuyera mukombe
Yakapfava & Inodziya Yemasikati / Ruvara Rakatungamira
SP-L08 SOICARE 300ml hanyanisi musoro wakasviba huni zviyo aromatherapy ultrasonic mafuta diffuser
SOICARE 100% Yakachena Yakakosha Mafuta Therapeutic Giredhi Aromatherapy Oiri yeDiffuser
SP-L09 SOICARE 300ml huni zviyo 7 Led Lights yakakosha mafuta aromatherapy ultrasonic diffuser